Iyo Yakanakisa Tsika Yekutengesa Chitoro Pamhepo
Mumwe wevatengi vangu ari kupinda munzira yekuita mharidzo dzekutengesa uye akandikumbira kurudziro ye mapepa ekunyorera yelaptop yake uye sekusiya-kumashure nevatengi vake nevatengi. Ndichave akatendeseka kuti ndaraira zvitupa online uye chete ezvimiti zvemhando yepamusoro zvandakambowana nemutengo wakanaka uye shanduko huru yave Sticker Mule.
Kiyi yesarudzo yangu ndeye chinamirwa chinouya zviri nyore pasina kubvarura uye kuita nyonganyonga hombe. Ndiri kugara ndichitenga zvishandiso zvitsva nemidziyo, uye kazhinji ndinopa kana kutengesa zvekare zvangu. Kana uine chinamirwa chakachipa, vanenge vasingakwanise kubvisa pasina makemikari akakodzera. Sticker Mule inogara ichitumira zvimiti izvo, kunyangwe makore gare gare, zvobvaruka mune chimwe chidimbu chakanaka. Ini ndinotenda ndiko kusanganiswa kweye yavo yekunamatira mhando uye yavo yekunamatira inovaita vakanaka kwazvo.
Sticker Mule: Tsika Dzinonamira
Sticker Mule zvitambi zvine chinhu chakakosheswa chinovadzivirira kubva pakuratidzwa nemhepo, kunaya, uye nechiedza chezuva. Iwe unogona kutozviisa mudhishi rako rekuwachira uye kuti vabude vachitsvaga nyowani nyowani.
Sticker Mule ndiyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekutenga tsika yakadhindwa zvigadzirwa. Odha mumasekondi makumi matanhatu uye isu ticha shandura zvigadzirwa zvako nemifananidzo kuva zvimisikidzo zvetsika, magineti, mabhatani, zvinyorwa, uye kurongedza mumazuva. Ivo vanopa emahara online humbowo, yemahara kutumira kwepasirese, uye nekukurumidza-kukurumidza kutendeuka.
Sticker Mule inopa zvinyorwa zvevinyl, zvidhori zvekufa, denderedzwa, zvirevo, zvimiti, matanda evhavha, zvimiti zvebhuni, mapepa ekunamatira, zvimiti zvekutsvoda -cheka, zvimiti zvekuchinjisa, zvimiti zvemakona zvakakomberedzwa , mabhatani, uye kunyangwe kurongedza tepi.
Raira zvitambi zvako mumasekondi uye ugamuchire emahara epamhepo humbowo, kutumira kwemahara pasirese, uye nekukurumidza-kutendeuka.
Tenga Zvimiti Zvino
Tags: zvakanakira kunamira onlinebumper zvimitimabhatanidenderedzwa zvitambibvisa zvitambitsika tepikufa akacheka zvimitikufa-cheka zvimititsvimbo dzakatemwachitaridzi dispensersmatehwe emakomputamaginetizvidhori zve denderedzwazvitenderedzwadzakatenderedzwa kona zvimitismartphone matehwematanda akaenzanaanonamira anonamira-akacheka matikitichinamira nyurusimapepa ekunamirastickerschinja zvitambiVinyl anonamira
Maitiro Ekuwedzera Yako Arhente SeCollaborator Kune Yako Shopify Chitoro